Qaxootigii ku soo qulqulay Jarmalka oo la sheegay kala bar inay heystaan shaqo joogto ah… – Hagaag.com
Qaxootigii ku soo qulqulay Jarmalka oo la sheegay kala bar inay heystaan shaqo joogto ah…
Daraasad Jarmalka dhowaan lagu sameeyay ayaa shaaca ka qaaday in kala bar qaxootiga soo galay Jarmalka ilaa sanadkii 2013 ay ku jiraan shaqo joogto ah shan sano kadib imaatinkooda.
Tani waxay ku timid daraasad ay sameysay Machadka Jarmalka ee Daraasaadka Suuqa Shaqada iyo Shaqaalaynta, kaas oo uu yiri “Is dhexgalka suuqa shaqada waxaa lagu gaaray si dhakhso ah marka loo eego qaxootigii sanadihii la soo dhaafay.”
Daraasadda ayaa muujisay in kabadan laba-meelood qaxootiga ay heleen shaqo waqti buuxa ah, laakiin waxay xaqiijisay in farqi weyn u dhexeeya haweenka iyo ragga, maadaama kaliya 29% haweenka qaxootiga ahi ay shaqo heleen ka dib shan sano kadib magangalyadooda Jarmalka, halka boqolkiiba ragga ka yahay 57% .
Waxaa xusid mudan in saamiga shaqaalaha ka midka ah qaxootiga u soo qulqulay Jarmalka ka dib dagaalladii Yugoslavia ee sagaashameeyadii qarnigii la soo dhaafay, ay ka yaraayeen shan sano ka dib markay yimaadeen, oo gaareen kaliya 44%.
Maqaal lagu daabacay wargeyska Ingiriiska ee “The Times” bishii Agoosto ee la soo dhaafay, qoraa Roger Boyz wuxuu ku sheegay in malaayiin muhaajiriin ah oo ka kala yimid wadamo kala duwan ay si dhaqso leh ugu biireen bulshada Jarmalka, isla markaana magdhow u yihiin heerka dhalashada oo hooseysa dalka Jarmalka.
Boyz wuxuu intaas ku daray in qaxootigu qayb ka noqdeen xoogsatada jarmalka, waxayna la midoobeen asxaabtooda Jarmalka, maadaama ay fursad u heleen iyagoo da’dooda yar iyo awoodooda jir ahaaneed oo sareeysa iyo heerkooda waxbarasho oo wanaagsan.
Nidaamkooda waxbarasho, tababar, iyo luqadda Jarmalka – qoraagu wuxuu sheegay – waxay ka dhigtay inay mutaystaan ​​inay si toos ah ugu galaan suuqa shaqada oo iyagu u baahnaa.